musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kirk Ziehm akagadza CEO mutsva weBuoutout
Buildout, mutungamiri muCRE kushambadzira otomatiki, akagadza Kirk Ziehm seye CEO wekambani nyowani. Mutungamiriri anoshanduka-shanduka uye ane ruzivo, Kirk anounza rekodhi rekodhi yemakore makumi maviri neshanu ehutungamiriri hwakasarudzika, manejimendi manejimendi uye tarisiro yehurongwa hwekubudirira kufambisa Zvivakwa zvitsva uye zvirongwa zvekukura.
Pakutanga, Kirk aibata chinzvimbo chepamusoro chehutungamiriri pakutungamira vanopa tekinoroji vanosanganisira Zego (Inofambiswa nePayLease), SeatGeek, uye Cvent. Chazhinji munguva pfupi yapfuura, Kirk aive COO weZego (Inowaniswa nePayLease), iyo tekinoroji yekambani yezvivakwa iyo inobatsira vashandisi kuvandudza ruzivo rwavo rwekugara nekusimudzira kuchengetwa.
"Buildout ine nhoroondo yakapfuma yekushandira vekutengesa vemunharaunda," akadaro Ziehm. "Ndiri kutarisira kushanda pamwe nechikwata chedu chine tarenda kuti tirambe tichiendesa nekuvandudza edu anotungamira-ekugadzirisa mhinduro mukati meCRE dhiri rehupenyu. Kubva pakushambadzira kuenda kuCRM kusvika kubackoffice - yedu North Star iri kugonesa vatengi vedu vanoshamisa kuvhara madhiri akawanda, kuva nekuonekwa kwakanyanya mumasangano avo uye kuwana data riri nani mumisika yavo. "
Kris Krisco, Chief Customer Officer uye Co-Muvambi weBuoutout, akati, "Tiri kufara uye tine rombo rakanaka kuva naKirk kuchikwata chedu. Chiitiko chake chekutungamira, kugadzirisa uye kuwedzera mashandiro chichava chinhu chakakosha mukubudirira kwevatengi vedu uye ruzivo. Remangwana rakajeka kune vatengesi! "